Landa i-Airbus A310 Multi-Livery FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 87.9 MB
Play 20 564
Umbhali: UThomas Ruth, upake ngeLuis Quintero, uphinde ulandelwe yiRiooooo
Iphakethe eliqhakazile equkethe i-Airbus A310-200 / 300 / MRTT enezikhangiso ze-34 nemisindo yangempela ye-GE ne-PW. Amamodeli kanye ne-VC eyenziwe nguThomas Ruth. Kufaka i-FMC, i-GPWS, Ukusingatha iGround, i-V-Speed, ne-Flight Data gauges. Ama-cockpits ama-virtual nama-panel aphelele kakhulu nge-gauges ahlukile (bheka izithombe-skrini ezingezansi).
Uhla lwezincwadi zokubambisana : Kuwait Airways - Martinair - Pan Am - Delta Airlines - Air France - Sabena - Swissair - Thai Airways - Air India Cargo - Interflug - Uzbekistan Airways - Air Transat - Republique Française - Air Paradise International - Air Wagon International - Lion Airlines - Luftwaffe VIP 10 + 21 - FedEx GE Livery - FedEx PW Livery - I-Ariana Afghan Airlines - I-Air Africa - i-Iran Air - i-Lufthansa - i-Turkish Airlines - i-Singapore Airlines - i-Austrian Airlines - i-Air Plus Comet - i-Air Madrid - i-Fuerza Aerea Española - iSata International - iJordanian Jordanian - I-Tarom - Siberia Airlines - MRTT Luftwaffe.
I-Airbus A310 iyimodeli ehamba phambili yezindiza ezakhiwa yi-Airbus ngesisekelo se-Airbus A300. Kufana ne-Boeing 767.